Ny Fikambanana Ny Fanahy Maha Olona eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena
eo amin’ny sehatra
Hita sy tsapa tamin’izany fa tsy nisy fijerena firehana sy foto-kevitra ny rehetra fa nampiseho firahalahiana feno fahavononana hampandroso ny faritra misy azy tsirairay avy avokoa, nodinihana tamin’izany ny fomba ahafana mizara traikefa ho an’ireo any ambanivohitra mba ahafahany manana fahalalana sy mahafantatra ny tokony ataony manoloana ny lalana misy; hisy ny paikady tahaka ny fanofanana ny zanaka Malagasy sy ny fanantanterahana ny tohi-vakam-pirahamonina , napetraky ny Filohany Fikambanana Ny Fanahy Maha-Olona; Ny Rado Rafalimanana fa tsy maintsy miara-miasa amin’ny Fanjakana Foibe mba ahafahana manantanteraka ny fampandrosoana haingana. Haverina ihany koa hoy izy ny fandalinana sy fanajana ny soa toavina Malagasy, ka hajain-tsika ireo taranaka aoriana. Nandray anjara fitenena avokoa ireo Ben’ny Tanana ary nitady vaha-olana manoloana ireo olana izay sedrain’ny any amin’ny Faritra sy nandinika ny mety hampandroso ny Kaominina hiadidiany.
Ny Ben’ny Tanana tokoa no vato ifaharan’ny “Vatoeka”; izany hoe ifaharan’ny toekarena, hisy araka izany ny fidinana ifotony hijery nyzava-misy ka hanantanteraka avy hatrany ireo tetik’asa sy hetahetan’ny mponina any amin’ny faritra tsirairay manerana an’iMadagasikara.
(Ny Rado Rafalimanana sy ny mpiara-dia aminy)
(Solon-tenan’ny Ben’ny Tananan’I Madagasikara)
(Tanora Ny Fanahy Maha-Olona)